Geelle: “Waa in xal loo helaa Khilaafka Farmaajo & Rooble si loo badbaadiyo Soomaaliya”. | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Wararka Maanta Geelle: “Waa in xal loo helaa Khilaafka Farmaajo & Rooble si loo...
Geelle: “Waa in xal loo helaa Khilaafka Farmaajo & Rooble si loo badbaadiyo Soomaaliya”.
Madaxweynaha Jabuuti Ismaciil Cumar Geelle oo khudbad ka jeediyay Shirka Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaa dul istaagay Xaaladda Siyaasadeed ee Soomaaliya, Dagaalka Itoobiya, Khilaafka kala dhaxeeya Dalka Xad-wadaagga ay yihiin ee Eretareeya & qodobo kale.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle mar uu ka hadlay Xaaladda Soomaaliya gaar ahaan Khilaafka u dhaxeeya Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo & Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble waxa uu soo jeediyay in ay xal ka gaaraan waxyaabaha ay isku hayaan.
“Jabuuti waxa ay ka welwelsan tahay khilaafka madaxda sare ee Dowladda iyada oo uu dalka ku jiro Xaalad kala guur ah, dareenkeenna waa in xal loo helaa si aanay saameyn adag ugu yeelan jadwalka Doorashooyinka” ayuu yiri Madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti oo ka hadlay kulanka Qaramada Midoobay.
“Khilaafka u dhaxeeya Madaxda sare ee Dowladda waxa uu saameyn taban ku yeelan karaa doorashooyinka balse xalka looga hortagi karo waa in waan-waan ku dhammeeyaan, Jabuuti xaqiiqdii way ka welwelsan tahay xaaladdaas” ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Jamhuuriyadda Jabuuti waxa codkeeda ku biirisay Dalalka, Hay’adaha iyo ururrada Caalamiga ah ee ku baaqay in xal nabadeed lagu dhammeeyo khilaafka u dhaxeeya Madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday & Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka.
Next articleWasiiru dowlaha madaxtooyada Galmudug oo shaaciyay inuu fashilmay wada hadalkii Farmaajo iyo Rooble